कोलकाता, भारत को सबै भन्दा सुन्दर शहरहरु को बीच | Absolut यात्रा
कलकत्ताब्रिटिश भारतको पूर्व राजधानी, अझै पनि केही पुरानो लालित्य राख्छ, जो यो देश मा अन्य ठूला शहरहरु देखि एक फरक शहर बनाउँछ। आज पनि यो पश्चिम बंगाल राज्यको र भारतको सांस्कृतिक केन्द्रको गर्व राजधानी रहेको छ।
पश्चिमी यात्रीको लागि कलकत्ताको भ्रमणको बारेमा सब भन्दा राम्रो कुरा यो हो कि तपाईले त्यो सबै पाउनुहुनेछ भारतको वास्तविक सार, तर तपाईले अरु धेरै पनि पाउनुहुनेछ। र यो यो शहरमा जहाँ five० लाख भन्दा बढी मानिसहरू बस्छन् ईतिहास, कला, संस्कृति र रमाईलो.
कोलकाता पनि विरोधाभासहरूको एक शहर हो। यसमा, दरबारहरू र लक्जरी विलाहरू विश्वका सबैभन्दा गरीब छिमेकका केही सँगसँगै मिलेर खडा हुन्छन्, जहाँ प्रसिद्ध मदर टेरेसा दशकौंसम्म अथक मानवीय कार्यको विकास गर्नुभयो।
तर सबैभन्दा मुख्य कुरा, कोलकाता मनमोहक गन्तव्य हो कि कोही पनि उदासीन छैन। यी हुन् आवश्यक भ्रमणहरू:
1 दक्षिणेश्वर मन्दिर
2 हावडा ब्रिज
3 मैदान र भिक्टोरिया मेमोरियल
4 बेलूर मठ
5 कलकत्तामा अन्य आवश्यक भ्रमणहरू
देशको सब भन्दा सुन्दर र प्रभावशाली भवनहरू मध्ये एक। को दक्षिणेश्वर मन्दिर लाई समर्पित छ देवी काली, सधैं भक्तहरू र पर्यटकहरूले भरिएको।
मन्दिर किनारमा खडा छ हुगली नदी। यो १ th औं शताब्दीमा परोपकारीको पहलमा निर्माण गरिएको थियो रानी रश्मोनी। यसको संरचनाले यसको नौ ठूला टावरहरूतर्फ ध्यानाकर्षण गर्दछ। पहिले नै एउटा ठूलो आंगन खुल्छ जहाँ विश्वासीहरूले शिव, विष्णु र वास्तवमा काली जस्ता हिन्दू धर्मका देवताहरूको विशाल सेतो संगमरमरका मूर्तिहरूको पूजा गर्न र प्रार्थना गर्न सक्छन्।
मन्दिरको फेदमा छन् घाटनदी किनारमा ओर्लिएका पवित्र पाइलाहरू।
दक्षिनेश्वर मन्दिरको प्रवेशद्वार नि: शुल्क छ, हुनसक्छ यसले किन मानिसहरूलाई सधैं सँधै भइरहेको हुन्छ।
धेरैका लागि यो शहरको उत्कृष्ट आइकन हो। यद्यपि यसको आधिकारिक नाम हो रवीन्द्र सेतु, कलकत्ताका सबैले उनलाई अंग्रेजीले दिएको नामबाट चिन्छन्: हावडा ब्रिज। यो शहर १ 1943 XNUMX मा छिमेकी शहर होवडाबाट पहुँच प्रदान गर्न शहरलाई उपलब्ध गराउनको लागि उद्घाटन गरिएको थियो, जहाँबाट यसको नाम लिन्छ।
कोलकातामा हावडा ब्रिज
यो अद्भुत धातु संरचनाले भारी यातायात समर्थन गर्दछ: एक दिनमा १ 150.000०,००० सवारी साधन र 90.000 ०,००० भन्दा बढी पैदल यात्री यसको आयामहरू निम्नानुसार छन्: २१217 मीटर लामो र 90 ० मिटर अग्लो। रातमा यो कलकत्ताका व्यक्तिहरूलाई एउटा सुन्दर दृश्य प्रस्तुत गर्दै रोशन गरिएको छ।
मैदान र भिक्टोरिया मेमोरियल
शहर मा सब भन्दा महत्वपूर्ण पार्क, औपनिवेशिक समयमा रूपमा चिनिन्छ ब्रिगेड परेड मैदान। यो कलकत्ताको एकदमै मध्यभागमा रूखहरू र घाँसे क्षेत्रहरूको साथ एक विशाल एस्प्लानेड हो। शहर सडकहरूको हलचलबाट बच्नको लागि यो उत्तम स्थान हो, जुन पर्यटकहरूका लागि थोरै भारी हुन सक्छ।
कलकत्ताको मैदानमा क्रिकेट खेलाडीहरू, पृष्ठभूमिमा भिक्टोरिया मेमोरियलको साथ
अन्य चीजहरू मध्ये, मैदान पार्क मा तपाईं लोकप्रिय पाउनुहुनेछ ईडन गार्डन क्रिकेट मैदान र कलकत्ता रेसकोर्स।
तर सबै भन्दा माथि, पार्क को एक छेउमा अद्भुत भवन खडा छ भिक्टोरिया मेमोरियल१ 1901 ०१ मा उनको मृत्यु पछि रानी भिक्टोरियाको सम्मानमा एउटा स्मारक स्मारक। यसको भित्री भागमा एउटा संग्रहालय छ जहाँ रानीको जीवनमा तेल चित्रहरू प्रदर्शन गरिएको छ।
अर्को कलकत्तामा अवश्य अवश्य देख्नुपर्दछ निस्सन्देहको मन्दिर बेलूर मठ। यो केवल कुनै मन्दिर होइन, तर एकदमै विशेष मन्दिर हो किनकि यो नै हो रामकृष्ण आन्दोलनको मुटु। यसको वास्तुकलाको सब भन्दा उल्लेखनीय कुरा भनेको यसको लगभग असम्भव ईसाई, इस्लामी, हिन्दू र बौद्ध कलाको फ्यूजन हो। र यो यो हो कि यसका निर्माणकर्ताहरूले यो मन्दिर सबै धर्महरूको एकताको प्रतीक हो भन्ने सोचेका थिए।
बेलूर मठको एक्लेक्टिक मन्दिर
कलकत्तामा अन्य आवश्यक भ्रमणहरू
कोलकातामा हेर्न र पत्ता लगाउनको लागि रोचक स्थानहरू अनन्त छन्। यो सहि लिन राम्रो छ र शहर को एक अलग क्षेत्र को अन्वेषण को लागी तपाइँको बसाई को हरेक दिन समर्पण। एक राम्रो योजना, उदाहरणका लागि, ब्रिटिश औपनिवेशिक ट्रेसहरू खोज्नु हो, जुन हामी फेला पार्नेछौं फोर्ट विलियममा सैन पाब्लो क्याथेड्रल र नियो गोथिक भवनमा उच्च अदालत.
शहरको तीव्र र रंगीन वातावरणमा आफूलाई डुबाउनको लागि, तपाईंले भ्रमण गर्नुपर्नेछ मुलिक घाटमा फूल बजार र फेब्रिक र शिल्प स्टालमा ह्याग्ल नयाँ बजार। यो छोड्नु पनि उचित हो पुरानो चिनटाउनमा Phears Lane (पुरानो चिनटाउन)। यद्यपि एक ग्यास्ट्रोनोमिक अनुभव एक सय बंगाली अनुभव लिन, यसलाई परम्परागत रेस्टुरेन्टहरूमा रोक्नु आवश्यक छ पार्क स्ट्रिट.
एक अधिक आरामदायक भ्रमण द्वारा प्रदान गरिएको छ कलकत्ता बोटानिकल गार्डेन, जहाँ विशाल लिलीहरू बढ्छन् र जसमा हामी एक बगैंचाको रूख सदियौं पुरानो पाउनेछौं। त्यहाँ तपाईं अन्ततः यति धेरै भावनाहरू बीच एक सानो शान्ति पाउनुहुनेछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: Absolut यात्रा » कोलकाता, भारत को सबै भन्दा सुन्दर शहरहरु को बीच